परिश्रमले धनी भएको देश अमेरिका « LiveMandu
१५ कार्तिक २०७७, शनिबार २०:०९
Published On : १५ कार्तिक २०७७, शनिबार २०:०९
धेरै मानिसमा अमेरिकी जीवन अति सरल छ भन्ने भ्रम हुन सक्छ। तर सोचे जस्तो अमेरिकी जीवन सरल भने छैन। भौतिक सुख–साधनहरूको उपलब्धता अति सरल हुँदाहुँदै पनि अनेक प्राकृतिक विपत्का कारण अमेरिकी जीवन सरल छैन। अनेक किसिमका वितण्डा मचाएर प्रकृतिले अमेरिकीहरूलाई अनेक दुःख, कष्ट दिने गर्दछ। अमेरिकालाई मुख्यगरी चार प्राकृतिक समस्याले बढी सताउने गरेको छ। समुद्री आँधी (Hurricane), अत्यधिक हिमपात तथा बरफ बन्ने वर्षा (freezing rain), बवण्डर (Tornado) तथा डढेलो (Wildfires) ले अमेरिकालाई भय, त्रास र ठूलो जनधनको नोक्सानीसहित प्रत्येक वर्ष सताउने गरेको छ।
USA: Built on Hard Work-Article
अनेक प्राकृतिक विपतले अमेरिकालाई सताए पनि यो मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको छैन। प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न अमेरिकाले अन्य मुलुकसँग आर्थिक सहयोग मागेको छैन। अहिले पनि अमेरिका विश्वको एक नम्बर महाशक्ति नै छ। यस्तो किन भएको होला?
कल्पना गरेर, इच्छा मात्र गरेर धनी भएको होइन। पसिना बगाएर धनी भएको हो। पाण्डवहरूका लागि छोटो समयमा नै सुन्दर दरबार निर्माण गरिदिने ‘मय’ जस्तै चमत्कारी किसिमले निर्माण गरिदिने क्षमता अमेरिकीहरूमा रहेको देख्न सकिन्छ। पाँच, सात तले बाटो होस् वा फराकिला, लामा राजमार्गहरू वा गगनचुम्बी घर, अमेरिकीहरूले आफ्नै परिश्रमले निर्माण गरेका हुन्।
सन् २००० पछिकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा अनेक ठूला–ठूला समुद्री आँधी आएर जनधनमा ठूलै क्षतिपु–याएका छन्। सन् २००० पछि आएका केही अति शक्तिशाली समुद्री आँधी एवं तिनले पु–याएको आर्थिक क्षति निम्न प्रकार छन्। अमेरिकामा समुद्री आँधीको उचित अभिलेख राख्न एवं तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक समुद्री आँधीलाई छुट्टाछुट्टै नाम दिने गरिन्छ। जस्तै रिटा, कट्रिना, इज्जाक आदि।
कट्रिना नाम दिइएको समुद्री आँधीले ‘ज्याज म्युजिक’ को उद्गमस्थल मानिएको र प्राचीन फ्रान्सेली संस्कृतिको धरोहर ठानिएको लुजियाना राज्यको प्रख्यात साङ्गीतिक शहर न्यू ओर्लियन्सलाई नराम्ररी प्रभावित पा–यो। भनिन्छ, कट्रिनाको प्रभावबाट निराश र हतास धेरै न्यू ओर्लियन्सवासी अन्यत्र बसाइँ सरे। लुजियानाका अन्य शहरका बासिन्दामा पनि त्यही स्थिति देखियो।
अगस्त २९, २००५ मा अमेरिकामा आएको अति शक्तिशाली समुद्री आँधी कट्रिनाले न्यू ओर्लियन्समा ध्वंस नै मचायो। अगस्त ३१ सम्म, तीन दिनभित्र न्यू ओर्लियन्सको ८० प्रतिशत भूमि जलमग्न हुन पुगेको थियो। केही भागमा त १५ फिटसम्म पानी जमेको थियो। तेल (पेट्रोलियम) उत्पादन र प्रशोधन कार्य कट्रिनाले गर्दा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ वृद्धि भएको थियो। न्यू ओर्लियन्सको ८० देखि ९० प्रतिशत बासिन्दालाई अन्य सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गरिएको थियो। शहरलाई लगभग खालि नै पारिएको थियो। सहयोगको यत्रो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि आफूसँग सवारीसाधन नभएका एवं समयमा उक्त विपद्बारे जानकारी नपाउने केही व्यक्ति जलाशय बनेको त्यो शहरमा फसेका थिए। केही जोगिएका एवं उद्धार कार्यमा खटेका मानिसले कतिपय लाश पानीमा बगिरहेको देखेका थिए। अति विध्वंसकारी त्यो समुद्री आँधी, कैट्रिना, ले १ हजार ४ सय ६४ न्यू ओर्लियन्सवासीको ज्यान लिएको थियो। यो आलेख तयार पारिरहँदा ओक्लहोमा राज्यका विभिन्न शहर, आजको दिनमा बरफ बन्ने वर्षा (Freezing rain) बाट पीडित छन्। रूखमा परेको पानी जमेर बरफ बन्दा र बरफको भार रूखले थेग्न नसक्दा अनेकौं रूख भाँचिएका छन्। विभिन्न स्थानमा बिजुली गएको छ। बाटो चिप्लो पार्ने गरी बरफ जमेको छ। ओक्लहोमाको अनेक स्थानमा जीवन सामान्य हुन सकेको छैन।
अनेक प्राकृतिक विपतले अमेरिकालाई सताए पनि यो मुलुकको आर्थिक विकास अवरुद्ध भएको छैन। प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न अमेरिकाले अन्य मुलुकसँग आर्थिक सहयोग मागेको छैन। अहिले पनि अमेरिका विश्वको एक नम्बर महाशक्ति नै छ। यस्तो किन भएको होला? उत्तर गा–हो छैन। अमेरिकीहरू कठोर परिश्रम गर्छन्। कठोर परिश्रम गरेर नै अमेरिकीहरूले यो कठिन भूमिलाई हराभरा, उब्जाउ, उत्पादक पारेका छन्। अमेरिकाले संसारभरिमा नै सर्वाधिक भटमास उत्पादन गर्छ।
यसले गर्दा अमेरिका धनी भएको हो। कल्पना गरेर, इच्छा मात्र गरेर धनी भएको होइन। पसिना बगाएर धनी भएको हो। पाण्डवहरूका लागि छोटो समयमा नै सुन्दर दरबार निर्माण गरिदिने ‘मय’ जस्तै चमत्कारी किसिमले निर्माण गरिदिने क्षमता अमेरिकीहरूमा रहेको देख्न सकिन्छ। पाँच, सात तले बाटो होस् वा फराकिला, लामा राजमार्गहरू वा गगनचुम्बी घर, अमेरिकीहरूले आफ्नै परिश्रमले निर्माण गरेका हुन्। अमेरिका आफ्नै परिश्रमी नागरिकहरूको काँधमा उभिएको छ। परिश्रम गर्ने हो भने आफ्नो देशलाई ‘स्वर्ग’ बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण अमेरिकीहरूले विश्वलाई कर्म गरेर देखाएका छन्।